Iwe Une Peji Peji Vhidhiyo? Unofanira Iwe Here? | Martech Zone
Nguva pfupi yadarika ndakasangana ne Mamiriro eVhidhiyo 2015 mushumo kubva kuCrayon, saiti inotaura nezvayo ine yakanyanya kuunganidzwa yekushambadzira dhizaini pawebhu. Iyo 50-peji rekutsvagisa mushumo rakanyanya kutarisisa pane zvakadzama kuputsika kwemakambani anoshandisa vhidhiyo, kunyangwe vakashandisa mahara ekugamuchira mapuratifomu seYouTube kana akabhadhara mapuratifomu senge Wistia or Vimeo, uye ndeapi maindasitiri angangoshandisa vhidhiyo.
Kunyangwe izvo zvainakidza, chikamu chinonyanya kufadza chechirevo apa ndipo pavakatyora makambani nemaindasitiri vakatora mukana wekushandisa mavhidhiyo papeji ravo rekutanga. Zvinotoshamisa kuti chete 16% yeayo epamusoro makumi mashanu mawebhusaiti anoratidzira mavhidhiyo pane yavo saiti, saka ivo vachiri yakawanda nzvimbo yekukura.
Iwo maindasitiri mashanu ayo angangodaro aine mavhidhiyo pamapeji avo epamba maSoftware, Kushambadzira, Hutano, Isingabatsiri, uye Dzidzo. Kunyangwe ivo vachinyanya kuve nemavhidhiyo pane avo epamba mapeji, ingangoita 1 mu5 mawebhusaiti mune iwo maindasitiri ane emapeji epamba mavhidhiyo.
Pakati pemamwe maindasitiri angangoita ekuratidzira mavhidhiyo pane yavo peji rezvishoma zvakashamisa. Chete 14% yemabhizinesi ekufamba, 8% emaresitorendi uye 7% emawebhusaiti ekutengesa anoratidza mavhidhiyo zvakanyanya pamapeji avo epamba. Iyo Tourism, Chikafu & Beverage, uye maRetail maindasitiri fanira kuve pakati pevatungamiriri muvhidhiyo nekuda kwezvavari kutengesa.
Kune yega yega maindasitiri, avo vanogona vatengi vane chishuwo chakasimba chekuona zvavari kuwana vasati vaita sarudzo yekutenga. Chimbofunga nezvenguva yekupedzisira iwe yawakaona vhidhiyo huru yekuenda kunzvimbo yezororo kana kuresitorendi. Wakanga usingadi kuenda ikoko nekukasira? Kunyangwe kukambani yedu, taona kudzoka kwakasimba pane investimenti kubva kuine vhidhiyo papeji redu rekutanga.
Sezvo isu takavandudza yedu peji reimba vhidhiyo pa12 Nyeredzi Media, isu takave nezvakawanda 5-nhamba zvibvumirano zvatakavhara umo mutengi akanyatsonongedzera iro reji remberi vhidhiyo seyakakura pesarudzo yavo. - Rocky Walls, CEO we 12 Nyeredzi Media.
Chinhu chikuru chakatorwa kubva mumushumo uyu ndechekuti, nepo mabhizinesi ari kutanga kuratidza mavhidhiyo papeji ravo rekutanga - uye vachiona mhedzisiro nekuda kwazvo - kuchine nzvimbo yakawanda yekutora mukana wakawanda wevhidhiyo uye kuona kukanganisa kwainogona kuve nemakambani ' mitsara yepasi.
Dhawunirodha iyo 2015 Mamiriro eVhidhiyo Mushumo
Tags: krayonichikafu & chinwiwapeji repamba vhidhiyoHomepagehomepage videoyekutengesa vhidhiyoushanyivhidhiyo kushambadziraVimeoWisdomtia
Mahoridhe Ekushambadzira Matipi eRetail uye Ecommerce